(က)-ဖွံ့ဖြိုးရေးနောက်ကျပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသောဒေသနှင်‌့ မငြိမ်းချမ်းသောဒေသများသို့ ဆေးပင်စင် ယူခါနီးဝန်ထမ်းများနှင့် လုပ်သက်ပြည့်ပင်စင်ယူခါနီး ဝန်ထမ်းများအား စေလွှတ်ခြင်း မည်ကဲ့သို့စီမံဆောင်ရွက်သွားမည်ကို သိလိုခြင်းနှင်‌့စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း | Pyithu Hluttaw
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ (၃. ၅. ၂၀၁၉)
ဖွံ့ဖြိုးရေးနောက်ကျပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောဒေသနှင်‌့ မငြိမ်းချမ်းသောဒေသများသို့ ဝန်ထမ်းများစေလွှတ်သည့်အခါ ဆေးပင်စင်ယူခါနီးဝန်ထမ်းများနှင့် လုပ်သက်ပြည့်ပင်စင်ယူခါနီး ဝန်ထမ်းများအား စေလွှတ်ခြင်း၊ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ဌာနပြစ်ချက်ဖြင့်ဝန်ထမ်းများ စေလွှတ်ခြင်းတို့မှာ အစဉ်အလာတစ်ခုကဲ့သို့ ဖြစ်နေခြင်းအပေါ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့စီမံဆောင်ရွက်သွားမည်ကို သိလိုခြင်းနှင်‌့စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးစသည့် အဖက်ဖက်မှ နိမ့်ကျသော မိမိတို့မန်တုံမြို့ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးတစ်ဦး တာဝန်ကျခဲ့ပါကြောင်း၊ ၎င်းသည်အမြဲတမ်း သောက်စားမူးပြီး အိပ်လေ့ရှိပြီး လက်ရှိရာထူး၏ တာဝန်ကို မည်သည့်အရာမျှ မယူသည့်အပြင် လက်အောက် ဝန်ထမ်းများက လိုအပ်ချက်များ တင်ပြလာသည့် အခါမျိုးတွင် အမြဲပြန်ပြောသည့် စကားတစ်ခွန်းမှာ အလုပ်ဆိုသည်မှာ ရှာလုပ်ရင်ရှိတယ်၊ ရှာလုပ်လျှင် ပင်ပန်းတယ်၊ ထို့ကြောင့် အေးဆေးနေကြဟု ပြန်ပြောလေ့ရှိပါကြောင်း၊ ၎င်းကျောင်းအုပ်မကောင်း၍ ပြောင်းသွားလည်း အလားသဏ္ဍာန်တူသည့် ကျောင်းအုပ် နောက်တစ်ယောက် ပြန်ရောက်လာပါကြောင်း၊ ၎င်းကျောင်းအုပ်ဆရာမက အလယ်တန်းကျောင်းအုပ်ရာထူးနှင့် လုပ်သက်ပြည့်ပင်စင် ယူခါနီး ရာထူးတိုးဖြင့် ရောက်လာသည့် ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခင်ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော အလယ်တန်းကျောင်းသည် ကျောင်းသား ၁၀၀ ကျော်သာရှိပြီး ရုတ်တရတ် ကျောင်းသားဦးရေ ၁၆၀၀ ကျော်ရှိသည့် အထက်တန်းကျောင်းကို ပြောင်းလာသည့်အခါ အဓိကရင်ဆိုင်ရသည့် ပြဿနာက စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်ပြီး ဆက်လက်ပြီး ကျန်းမာရေးဌာန အကြောင်းကိုလည်း တင်ပြချင်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့မြို့နယ်မှာ တာဝန်ကျခဲ့သည့် ဆရာဝန်တစ်ဦးသည် အမြဲသောက်စားမူးပြီး အိပ်နေပါကြောင်း၊ ဆေးရုံတွင် အရေးပေါ်လူနာ ရောက်လာပါက သူအိပ်နေသည်ဆိုလျှင် ၎င်း၏မိခင်က ၎င်း၏သားအိပ်နေသည့်အတွက် အိပ်ရေး ပျက်မှာစိုးသည်ဟု ပြန်ပြောပါကြောင်း၊ ၂၀၁၆-၁၇ နောက်ထပ်ဆရာဝန်အသစ် ထပ်မံ၍ရောက်လာပါသော်လည်း အချိန်ပြည့်ခရီးထွက်၊ ခွင့်ယူ၊ လစာထုတ်ရက်သာတွေ့မြင်ရသဖြင့် ဆေးရုံလူနာများ ဆေးဝယ်သုံးရသည့်အဆင့် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးတွင် ဆိုလည်း ပြောင်းရွှေ့သွားသည့် ဦးစီးမှာ တာဝန်ကျစဉ်ကတည်းက ကျန်းမာရေးမကောင်းသဖြင့် အိမ်ထဲကနေ အိမ်ပြင်မထွက်နိုင်၊ နောက်တစ်ယောက် ထပ်ရောက်လာပြန်လျှင်လည်း မြန်မာစကား အချင်းချင်းပြောသည်ကို နားမလည် ပါကြောင်း၊ ဘာသာပြန်တစ်ယောက်ထားရပါကြောင်း၊ ယခု ရင်ဆိုင်နေရသည့် အခက်အခဲမျိုးသည် ဝေးလံခေါင်တီးသည့် ဒေသနှင့် မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျသည့် တိုင်းရင်းသားဒေသ တော်တော်များများ တွေ့ရပြီး အစဉ်အလာတစ်ခုကဲ့သို့ ဖြစ်နေကြောင်း၊ ခံယူကြရပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း (၈) တွင် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများသည် တန်းတူညီမျှမှု ရှိရမည်ဟု အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ယခုလိုဖော်ပြထားပါလျက် ပြစ်ချက်ရှိသော၊ မကောင်းသော ဝန်ထမ်းများအား ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျသည့် ဒေသသို့ပို့ခြင်းသည် ဥပဒေကိုမလိုက်နာရာ ရောက်ပါကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းများသည် ပြစ်ချက်ရှိသော်လည်း မိမိတို့ဌာနေတိုင်းရင်းသားများတွင် အပြစ်မရှိပါကြောင်း၊ ယခုအချိန်ကစပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျသော ဒေသများအား အသုံးမဝင်သော ဝန်ထမ်းများ ထပ်မံခန့်ထား ခြင်းအား ထပ်မံမလုပ်ရန် ပြည်သူများကိုယ်စား တောင်းဆိုချင်ပါကြောင်း၊ ယနေ့ ရင်ဆိုင်နေရသည့် ပြဿနာများ ဖြစ်သည့် ဝန်ထမ်းခန့်ထားရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ၊ တာဝန်ချထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ စွမ်းအင်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမြန်ဆုံးအဖြေရှာ ဖြေရှင်းရန် အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါကြောင်း၊
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အစဉ်အလာတစ်ခုကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည့် အရာများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပေးရန်အတွက် နိုင်ငံတော်မှ တာဝန်အပ်နှင်းခြင်း ခံရသည့်ဌာနက ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ့ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ဆောင်ပုဒ်ဆိုလျှင် ဝန်ထမ်းကောင်းမှ နိုင်ငံကောင်းမည် ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု‌ေနောက်ကျသည့် ဒေသတွင် ကောင်းသည့်ဝန်ထမ်း မရောက်လာသည့်အတွက် နိုင်ငံအတွက် ရင်လေးစရာဖြစ်ပါကြောင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံး တန်းတူဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန်အတွက် တန်းတူညီမျှမှုရှိရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊
အမှန်တကယ် လုပ်သက်ပြည့်ပင်စင်ယူခါနီး ဝန်ထမ်းများအား အမှန်တကယ် အရည်အချင်း ပြည့်မီခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ အသက်ကြီးပြီးနားရမည့် ပင်စင်လည်းယူခါနီး ရာထူးတိုးလည်း လျှောက်ခြင်းကို ခွင့်မပြုသင့်ပါကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ အမှန်တကယ် အရည်အချင်းများ မရှိဘဲ ရာထူးတိုးသွားသည့် ဝန်ထမ်းများကို ရာထူးတိုးလျှောက်ထားခြင်းကို လက်ခံသည့်အခါ အစဉ်အလာအရ ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသည့် ဒေသကိုပို့ခြင်းက များပါကြောင်း၊ နောက်ပြီး အမှန်တကယ် ပြစ်ချက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိသည့် ဝန်ထမ်းများကိုလည်း တာဝန်မှရပ်စဲရန် အကြံပြုလိုပါကြောင်း၊ အသုံးမကျသည့် လူများခန့်ထားခြင်းသည် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာကို ဖြုန်းတီးခြင်းနှင့် အတူတူ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အနေဖြင့် မိမိတို့ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများစွာ အားနည်းနေခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးနောက်ကျပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောဒေသနှင်‌့ မငြိမ်းချမ်းသောဒေသများသို့ ဝန်ထမ်းများ စေလွှတ်သည့်အခါ ဆေးပင်စင်ယူခါနီး ဝန်ထမ်းများနှင့် လုပ်သက်ပြည့်ပင်စင်ယူခါနီး ဝန်ထမ်းများအား စေလွှတ်ခြင်း၊ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ဌာနပြစ်ချက်ဖြင့် ဝန်ထမ်းများ စေလွှတ်ခြင်းတို့မှာ အစဉ်အလာ တစ်ခုကဲ့သို့ ဖြစ်နေခြင်းအပေါ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့ စီမံဆောင်ရွက် သွားမည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း မေးမြန်းပါသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးနှင်‌့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ သီးခြားဖြေကြားရန် မရှိကြောင်းနှင်‌့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့မှ နေပြည်တော်တွင်သာ ရုံးတည်ရှိရေးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးနောက်ကျပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသည့်ဒေသနှင်‌့ မငြိမ်းချမ်းသောဒေသများကို ရုံးခွဲများဖွင်‌့လှစ်ထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်းများမရှိပါကြောင်း ဖြေကြားချက်ပေးပို့ထားခြင်း ရှိပါကြောင်း၊ ထို့အတူ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သက်ပြည့်အငြိမ်းစား ယူရန် နီးစပ်သည့် အသက် ၅၇ နှစ်အထက် ရှိသူများနှင့် နာမကျန်းပင်စင်ယူခါနီး သူများကို အခြေချနေထိုင်လိုသည့် ဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အနေကြာကာလအတွင်း နှစ်နှစ်နှင့်အထက် သတ်မှတ်၍ အလှည့်ကျပြောင်းရွှေ့ခြင်းကို အခြေခံ၍လည်းကောင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ခက်ခဲသောဒေသများနှင်‌့ နယ်စပ်ဒေသများသို့ ဝန်ထမ်း၏တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင်‌့ ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်တို့ကို အခြေခံ၍ ဒေသခံများကိုသာ ဦးစားပေးတာဝန် ချထားခြင်းများကို ဝန်ထမ်းရေးရာအဆုံးအဖြတ်၊ အစည်းအဝေးအဆုံးအဖြတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ အပြစ်ရှိသူဝန်ထမ်းများအား တပ်ဖွဲ့၏စည်းကမ်းဥပဒေနှင့် ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း များအရ အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောဒေသနှင့် မငြိမ်းချမ်းသောဒေသများ၊ နယ်စပ်ဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ချထားခြင်း မရှိဘဲ ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲမှု ပေးနိုင်သည့် အရာရှိစီမံအုပ်ချုပ်ပြီး လက်အောက်သို့သာ ပြောင်းရွှေ့တာဝန် ချထားပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း ဖြေကြားချက်ပေးပို့လာပါသည်။
ထို့အတူ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် နယ်စပ်ဒေသများတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောဒေသနှင့် မငြိမ်းချမ်းသည့်ဒေသသို့ ဝန်ထမ်းများအားစေလွှတ်ရာတွင် အလှည်‌့ကျစနစ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဒေသခံဝန်ထမ်းများ၊ မိသားစုအခက်အခဲရှိသည့် ဝန်ထမ်းများအား ဦးစားပေးပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ပေးခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ အနေကြာဝန်ထမ်းများအား ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ပေးခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံလစ်လပ်မှု အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ရာထူးတိုးဝန်ထမ်းများအား ပြောင်းရွှေ့နေရာ ချထားပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါကြောင်းနှင်‌့ လုပ်သက်ပင်စင် ယူခါနီးဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနပြစ်ချက်ဖြင့်ရှိသော ဝန်ထမ်းများကို စေလွှတ်ခြင်း မရှိပါကြောင်း ဖြေကြားချက် ပေးပို့လာပါသည်။
ထို့အတူ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ရုံးအဆင့်ဆင်‌့များတွင်ရှိသည့် စီမံခန့်ခွဲရေးအဆင့်ဝန်ထမ်းများအား ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားခြင်းနှင်‌့ ပတ်သက်၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်သည့်ဒေသ၊ အသင့်အတင်‌့ကောင်းမွန်သည့်ဒေသ၊ ခက်ခဲသည့်ဒေသဟူ၍ အုပ်စုသုံးစုသတ်မှတ်ပြီး ဒေသတစ်ခုတွင် သုံးနှစ်ခန့် ကာလကြာမြင့်ချိန်အတွင်း အုပ်စုတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ချထားရေးမူကို ယေဘုယျအားဖြင့် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက် ထားသော်လည်း အငြိမ်းစားယူပြီးသည့်အခါ ‌အဓိကနေထိုင်မည့်နေရာ ဌာနသို့ အငြိမ်းစားမယူမီ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ချထား ပေးပါရန် တင်ပြလာမည်ဆိုလျှင် အသက် ၅၇ နှစ်ပြည့်ပြီး လျှောက်ထားသည့် နေရာလစ်လပ်မှုရှိမည်ဆိုလျှင် ဝန်ထမ်းရေးရာ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဦးစားပေးပြောင်းရွှေ့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ဆေးပင်စင်၊ လုပ်သက်ပြည့်ပင်စင်ယူခါနီး ဝန်ထမ်းများကို သီးခြားရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝေးလံဒေသများသို့ စေလွှတ်ခြင်းမရှိပါကြောင်း၊ ပြစ်ဒဏ်ကြောင့်၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လက်ရှိဒေသတွင် ဆက်လက်ထားရှိရန် မသင့်သော ဝန်ထမ်းများကို စီမံခန့်ခွဲနည်းလမ်းအရ ပြောင်းရွှေ့တာဝန် ချထားရာတွင်လည်းကောင်း၊ ယင်းတို့တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ဒေသမှ ပြောင်းရွှေ့သောစက်ဝိုင်းနှင့် ညီသည့်ဒေသများသို့သာ အများစုပြောင်းရွှေ့ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှုနှင့် ယင်းတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဒေသများအလိုက် ယခင်အားသာခဲ့သည့် အခြေအနေအပေါ် မူတည်၍သာ ဝေးလံဒေသများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စေသင်‌့ပါက အလှည့်ကျ ပြောင်းရွှေ့တာဝန် ထမ်းဆောင်စေခြင်းမျိုး ရှိပါကြောင်း ဖြေကြားချက်ပေးပို့လာပါသည်။
ထို့အတူ စိုက်ပျိုးရေး၊ ‌မွေးမြူရေးနှင်‌့ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင်‌့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာနတို့က ပြောင်းရွှေ့သည့် မူဝါဒနှင်‌့စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ကာလ သတ်မှတ်တာဝန် ထမ်းဆောင်ပြီးပါက ကာယကံရှင်ဝန်ထမ်း ဆန္ဒပြုသည့် လစ်လပ်နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးခြင်း၊ လစ်လပ်နေရာမရှိပါက ယင်းဝန်ထမ်း ဆန္ဒပြုသည့် ဦးစားပေးနေရာများသို့ အလိုက်သင်‌့ သင်‌့လျော်မည့် အနီးဆုံးနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးခြင်းများကို ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းရေးရာ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောဒေသနှင့် မငြိမ်းချမ်းသော ဒေသများသို့ ဆေးပင်စင်ယူခါနီး ဝန်ထမ်းများ၊ လုပ်သက်ပြည့်ပင်စင်ယူခါနီး ဝန်ထမ်းများ စေလွှတ်ခြင်း မရှိပါကြောင်း၊ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်နှင်‌့ ဒေသပြောင်းရွှေ့ပေးရန် လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပေါ်လာပါက ဝန်းထမ်း၏ ထမ်းဆောင်နိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်၍ သင့်လျော်သည်‌့ဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးခြင်းကို မူဝါဒနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါကြောင်း ဖြေကြားချက်ပေးပို့လာပါသည်။
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူအင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၏ ဒေသပြောင်းရွှေ့တာဝန် ချထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင်‌့ပေးခြင်းများအား ဝန်ကြီးဌာနစီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီဖြင့် စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်းအားဆိုင်ရာ အနေဖြင့် နယ်စပ်ဒေသ တိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုးရေး တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်း ဝန်ထမ်းများ၊ ရာထူးတိုးမြှင်‌့ပြီး ပြောင်းရွှေ့‌ရသည့်ဝန်ထမ်းများနှင့် ဒေသခံဝန်ထမ်းများကိုသာ အများအားဖြင့် တာဝန်ချထားပေးလျက် ရှိပါကြောင်း၊ အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများ အနေဖြင့် မြို့ကြီးပြကြီး ဒေသသုံးနှစ်၊ အလယ်အလတ်ဒေသနှစ်နှစ်၊ ဝေးလံခေါင်းပါးဒေသ နိုင်ငံတော်အစိုးရက သတ်မှတ်သည့် ဒေသကို တစ်နှစ်သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ပင်စင်ခံစားမည့် ဝန်ထမ်းများအား ဝေးလံဒေသများသို့ တာဝန်ချထားခြင်း မရှိပါကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုခြင်းတို့ကြောင့် အချို့သောဝန်ထမ်းများအား ဝေးလံဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့ချထားခြင်းများ ရှိသော်လည်း အနည်းဆုံးနှစ်နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် ပြီးပါက ၎င်းတို့ဆန္ဒပြုလျှောက်ထားရာ ဒေသသို့ လစ်လပ်အင်အားအ‌ပေါ် မူတည်၍ ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းရေးရာ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါကြောင်း ဖြေကြားချက်ပေးပို့လာပါသည်။
ထို့အတူ စီးပွားရေးနှင်‌့ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ နယ်စပ်ဒေသများရှိ ကုန်သွယ်ရေး စခန်းများတွင် နေရာချထားရာတွင် ရုံးချုပ်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးပို့/သွင်းရုံးများရှိ ဝန်ထမ်းများအား ယင်းတို့၏ နယ်စခန်းတာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒသဘောထား၊ စခန်းများ၏ လုပ်ငန်းလိုအပ် ချက်အပေါ် မူတည်၍ ဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူး၊ အဆင်‌့၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်နှင်‌့ လုပ်ငန်းလိုအပ်မှုအရ အဖွဲ့ဖြင့်စစ်ဆေး၍ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးစေပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန် သင့်လျော်မှသာ ခြောက်လတစ်ကြိမ် လဲလှယ်တာဝန် ပေးအပ်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ နာမကျန်းပင်စင်၊ လုပ်သက်ပင်စင်၊ နှစ်ပြည့်ပင်စင်နှင်‌့ ပင်စင်ခံစားခါနီး ဝန်ထမ်းများအား နယ်စခန်းများ၏ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရှိမှသာ စေလွှတ်ခြင်းရှိပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ သီးခြားတာဝန်ပေးအပ်ပါက တစ်ဆင်‌့မြင့်ရာထူးတိုး၍ နိုင်ငံတော်မှသတ်မှတ်ပေးသည့် ဒေသစရိတ်ခံစားခွင်‌့ဖြင့် တာဝန်ပေးအပ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း ဖြေကြားချက်ပေးပို့လာပါသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှလည်း ရာထူးတိုး/အပြောင်းအရွှေ့ နေရာများကို ရာထူးအဆင်‌့အလိုက် စိစစ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး မူလတန်းပြရာထူးများကို မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံမှ လည်းကောင်း၊ အလယ်တန်းပြ ရာထူးများကို ခရိုင်‌ပညာရေးမှူးရုံးမှလည်းကောင်း၊ အထက်တန်းပြ ရာထူးများကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ရုံးများမှလည်းကောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းအုပ်နှင့် အထက်တန်း ကျောင်းအုပ်ရာထူးများကို အခြေခံပညာဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) မှလည်းကောင်း လုပ်သက်ရမှတ် တန်းစီဇယားဖြင့် ဆန္ဒပြုနေရာအပေါ် မူတည်၍ လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် နေရာများသို့ ပြောင်းရွှေ့ ခန့်ထားဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ ဆရာ/မများ၏ ဆေးပင်စင် ယူခြင်းနှင်‌့ လုပ်သက်ပြည့်ပင်စင် ယူခြင်းတို့မှ ဌာန၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ ကာယကံရှင်၏ ဆန္ဒနှင်‌့သာ သက်ဆိုင်ပါကြောင်း ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား အရေးယူဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဥပဒေပါပြစ်မှုမျိုးဖြင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ကိုးမျိုးတွင် ရာထူးတူဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှာ ပြစ်မှု ပြစ်ဒဏ်မဟုတ်ဘဲ စီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး နောက်ကျပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောဒေသနှင့် မငြိမ်းချမ်းသည့် ဒေသများတွင်သာ စေလွှတ်ခန့် ထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အသီးသီးတို့ လစ်လပ်ရာထူးအပေါ် မူတည်၍ လည်းကောင်း၊ ဆန္ဒလျှောက်ထားမှု အရသော်လည်းကောင်း၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းများအား စေလွှတ်ခန့်ထားခြင်းများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း ဖြေကြားချက်ပေးပို့လာပါသည်။
ထို့အတူ ကျန်းမာရေးနှင်‌့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှလည်း ဝန်ထမ်းများစေလွှတ်ရာတွင် ရုံးအကူမှ ဒုတိယဦးစီးမှူးအဆင်‌့ထိ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စရပ်များအား သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီအစည်းအဝေးသို့ တင်ပြ၍လည်းကောင်း၊ ဦးစီးဌာနအဆင်‌့နှင်‌့အထက် အထက်အရာရှိ အဆင်‌့များ၊ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စရပ်များအား သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအစည်း အဝေးတွင် တင်ပြဆွေးနွေးပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်း အဝေးသို့ ဆက်လက်တင်ပြဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းများခန့်ထားသည့် နေရာတွင် ဒေသခံများကို ဦးစားပေးခန့်ထားလျက် ရှိပါကြောင်း၊ ကာယကံရှင်ဝန်ထမ်းများမှ ဆန္ဒပြုလျှောက်ထားလျှင် ရာထူးနေရာ လစ်လပ်မှုအပေါ် မူတည်၍ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း ဖြေကြားချက် ပေးပို့လာပါသည်။
ထို့အတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဖွံ့ဖြိုးရေးနောက်ကျပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောနေရာများသို့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိသူများ၊ စည်းကမ်းကောင်းမွန်သူ များ၊ အသက်ငယ်ရွယ်သူများနှင့် တစ်ဆင့်မြင့်ရာထူး တိုးမြှင်‌့ပေးရန် အလားအလာရှိသူများကိုသာ ရွေးချယ်စေလွှတ်ပါကြောင်း ဖြေကြားချက်ပေးပို့လာပါသည်။
ထို့အတူ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း တိုင်းဒေသကြီးနှင်‌့ ပြည်နယ်များသို့ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် ဝန်ထမ်းများစေလွှတ်ရာ နယ်မြေဒေသအလိုက် သုံးနှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့် မြို့များ၊ နှစ်နှစ်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရမည့် မြို့များ၊ ရုံးတွင်းအမိန့်စာ ထုတ်ပြန်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ ကြောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနောက်ကျပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောဒေသနှင့် မငြိမ်းချမ်းသည့် ဒေသများသို့ ဆေးပင်စင်ယူခါနီး ဝန်ထမ်းများ၊ လုပ်သက်ပြည့်ပင်စင်ယူခါနီး ဝန်ထမ်းများနှင့် ပြစ်ချက်ရှိသည့် ဝန်ထမ်းများကို ရွေးချယ်စေလွှတ်ခြင်းများ မရှိပါကြောင်း ဖြေကြားချက်ပေးပို့လာပါသည်။
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင်‌့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများကို တာဝန်ချထားရာတွင် ဒေသခံများကို ဦးစားပေးရွေးချယ် ခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးတန်းစီဇယားအရ အလှည်‌့ကျသူများကို လစ်လပ်ရာထူးများသို့ တာဝန်ချထားပေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနောက်ကျပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသည့်ဒေသနှင့် နယ်မြေမအေးချမ်းသော ဒေသများတွင် တာဝန်ကျသည့် ဝန်ထမ်းများ စေလွှတ်သောအခါ အနည်းဆုံးနှစ်နှစ် သတ်မှတ်ပြီး နှစ်နှစ်ပြည့်၍ ပြောင်းရွှေ့လိုသော ဝန်ထမ်းများ တင်ပြလာပါက ဦးစားပေးပြောင်းရွှေ့ပေးခြင်း၊ တာဝန်ကျရာ နေရာ၌ပင် ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင်လိုပါက နှစ်နှစ်မပြည့်မီ ပြန်လည်တင်ပြစေခြင်း၊ တာဝန်ကျရာဒေသတွင် နှစ်နှစ်မပြည့်သော်လည်း လူမှုရေးအခက်အခဲများရှိပါက ကျိုးကြောင်း ဖော်ပြပြီးတင်ပြနိုင်၍ ဦးစားပေးပြောင်းရွှေ့ လျက်ရှိပါကြောင်း၊ အကြောင်းတစ်စုံ တစ်ရာကြောင့် ဌာနပြစ်ချက်ရှိပါက ထိုသူများကို ဝန်ထမ်းစည်မျဉ်းစည်းကမ်း၊ နည်းဥပဒေများအရ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း ဖြေကြားချက်ပေးပို့လာပါသည်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သာသာနာရေးနှင်‌့ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင်‌့ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သယံဇာတနှင်‌့သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်နှင်‌့ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင်‌့ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင်‌့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနတို့ကမူ ဖွံ့ဖြိုးရေးနောက်ကျပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသော ဒေသနှင့်မငြိမ်းချမ်းသော ဒေသများကို ဆေးပင်စင်ယူခါနီး ဝန်ထမ်းများ၊ လုပ်သက်ပြည့်ပင်စင် ယူခါနီးဝန်ထမ်းများ၊ ဌာန၏ပြစ်ချက်ရှိသည့် ဝန်ထမ်းများကို ပြောင်းရွှေ့မှု မရှိပါကြောင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ အရေးယူရသည့် ဝန်ထမ်းများရှိပါက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေအရသာ အရေးယူဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်းဟု ဖြေကြားချက်များ ပေးပို့လာသည့်အတွက် ပြည်‌ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန အားလုံးနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။
လက်တွေ့မြေပြင် အခြေအနေရဆိုလျှင် မိမိမြို့နယ်အတွက် ဥပမာတစ်ခုတင်ပြသည်မှာ ဘာတစ်ခုမှ မကောင်းပါကြောင်း၊ ၎င်းတို့ကို ဝန်ကြီးဌာနအဆင့်ဆင့်ကနေပြီး တင်ပြလာသည့် သုံးသပ်ချက်များ ၎င်းတို့၏ မူဝါဒများပေါ် ဖြေကြားခြင်းမျိုး တွေ့ရပါကြောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနဖြေကြားသွားသည့် အထဲတွင် မိမိလိုချင်သည့်အဖြေ ဘာတစ်ခုမှ မရပါကြောင်း၊ ယခုလို အစဉ်အလာတစ်ခု ဖြစ်နေသည့်အပေါ် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာက မူဝါဒများ ချမှတ်ရန် တာဝန်ရှိသည့် ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အပြောင်းအလဲများဖြင့် မည်ကဲ့သို့ စီစဉ်ပေးမည်နည်း၊ မိမိမေးခွန်းမေးသွားသည့် အထဲတွင်လည်း မိနစ်ပြည့်သွားသဖြင့် မေးမြန်းလိုသည်များ ကျန်ရှိနေပါကြောင်း၊ အမှန်တကယ် ပြစ်ချက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိသည့် ဝန်ထမ်းများကို တာဝန်မှရပ်စဲရန် အကြံပြုပါသည်ဆိုသည့် အဆက်မှာ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အနေဖြင့် မိမိတို့ဌာနကဖြစ်ဖြစ်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနကဖြစ်ဖြစ် ချမှတ်ထားသောမူဝါဒများ များစွာအားနည်းနေ သေးသည့်အတွက်ကြောင့် မိမိတို့အခုလက်ရှိ ပြဿနာများ ရင်ဆိုင်နေရခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကောင်းမွန်ုသည့် နိုင်ငံကို တည်ဆောက်နိုင်ရန် ပြည်တွင်းပြည်ပ ပညာရှင်နှင့်ပူးပေါင်းပြီး အဖြေရှာသင့်ပါကြောင်း၊ ယခုမိမိတို့ အမှန်တကယ် ရင်ဆိုင်နေရခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဝန်ကြီးဖြေသွားသည်က ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက တင်ပြလာသည့် ၎င်းတို့၏ မူဝါဒများဖြစ်ပါကြောင်း၊ အမှန်တကယ် ပြဿနာကို မည်ကဲ့သို့ အဖြေရှာမည်နည်း၊ မည်ကဲ့သို့ မူဝါဒများကိုအသုံးပြုပြီးမှ အမှန်တကယ်ရင်ဆိုင်နေရသည့် အဆိုပါ ဒေသများအတွက် မည်ကဲ့သို့ မူဝါဒအသစ်များ ချမှတ်အဖြေရှာမည်နည်းဆိုသည့် အဖြေကို ဆက်လက်ဖြေကြားပေးစေလိုပါကြောင်း ဆက်စပ်မေးခွန်း မေးမြန်းပါသည်။
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် ဦးစောဗယ်လင်တိုင်း
ဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံကနေတစ်ဆင့် ရရှိသည့် ဖြေကြားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှ မိမိတို့ သုံးသပ်ဖြေကြားခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့သော်လည်း တူညီတာတစ်ခုရှိသည်က နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပဒေ ၎င်းတို့အပေါ် မူတည်ပြီးမှ ဆောင်ရွက်ကြရပါကြောင်း၊ အကယ်၍ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိဘူးဆိုလျှင် သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ မိမိတို့အနေဖြင့် အတတ်နိုင်ဆုံး သက်ဆိုင်ရာဌာနကိုလည်း အားလုံးသိရှိသည့်အတိုင်း နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် စီမံချက်လည်း မိမိတို့ ရေးဆွဲထားခြင်းမျိုးရှိပါကြောင်း၊ ပြီးခဲ့သည့် ၁၀-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့က ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၎င်းအပေါ် မူတည်ပြီးမှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် စရာများလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ယခုလည်း ပြည်သူများဆီမှ ဝန်ထမ်းအပေါ် မည်ကဲ့သို့အမြင်များ ရှိသည်မှာလည်း လိုက်လံကောက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ မေလအလယ်ခန့်အချိန်တွင် ပြီးစီးမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက ဆက်လက်ပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဆိုသည့် အကြောင်းလည်း တင်ပြလိုပါကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။